Sekuphelile ukuba ngumantuntanendishi kuManyisa osesayinwe yiChippa - Impempe
Sekuphelile ukuba ngumantuntanendishi kuManyisa osesayinwe yiChippa
Usegcine elitholile iqembu azidlala kulo u-Oupa Manyisa obese kunesikhashana entuntanendishi kulandela ukudedelwa kwiMamelodi Sundowns ekupheleni kwesizini edlule.
Kwake kwabukeka sengathi ngeke awuswele umsebenzi uManyisa njengoba iTshakhuma Tsha Madzivhandila yagxuma kuqala yamsayinisa. Nokho izinto azihambanga ngendlela okwakulindeleje ngazo, wagcina eshiya kuleli qembu selihluleka wukumkhokhela.
Umqeqeshi weChilli Boys, uDan Malesela uthe kumjabulise kakhulu ukuthola lo mdlali ozosiza ukuzinzisa izinto esiswini kuleli qembu lakhe.
“Ngijabule ukuba nomdlali onethalente namava njengo-Oupa eqenjini. Uzoba wusizo olukhulu nj ngoba sekubhekwe ekuphethweni kwesizini nje manje.
“Sinemidlalo eminingi elandelana eduze kanti sibheke ukuyiqeda ngegiya eliphezulu le sizini,” kusho uMalesela.
UManyisa, owayelibamba kuhlanye izihlwele kudume u-‘Aceeee’ esakwi-Orlando Pirates, uthe ukujabulele ukunikwa leli thuba kwiChilli Boys.
“Ngijabule kakhulu. Okokuqala nje ngifuna ukubonga uMdali, nomndeni nje wonke weChippa ikakhulukazi usihlalo (uSivuyile Mpengesi) ngethuba lokudlala lapha. Engingakusho njengamanje wukuthi ngizokwenza okusemandleni ukusiza ozakwethu bazuze lokho abakubekelwe.
“Ngijabule kakhulu ngoba sesiside isikhathi ngingadlali kodwa sengisheshe ngangena esitayeleni seqembu. Ngiyabazi abadlali abaningi ngoba sengike ngadlala nabo bengozakwethu noma yiyizimbangi phambilini.
“Bangamukele ngezinhliziyo ezimhlophe nezandla ezifudumele. Ngijabule kakhulu,” kusho lo mdlali oneminyaka engu-32.
Previous Previous post: Izolwela ukubuyisa isithunzi iChiefs ngo-Ephreli
Next Next post: Kuqaqamba inhliziyo ukubuka iMaritzburg iphenduka ompushana kade yethembisa kanje